Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ - HBOT ọgwụ - Hyperbaric ọgwụgwọ
Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ - HBOT ọgwụ- Hyperbaric ọgwụgwọ
Home/Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ - HBOT ọgwụ- Hyperbaric ọgwụgwọ
Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ - HBOT ọgwụ- Hyperbaric ọgwụgwọteknamfg2018-01-21T06:10:26+00:00
Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ (HBOT)
Sayensị Na-akpata Ahụ Ike Ọrịa
Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ, bụkwa nke a maara dị ka HBOT, bụ ọgwụgwọ na-anapụta 100% oxygen na-arịa ọrịa nke onye ọrịa mgbe ha nọ n'ime ụlọ a na-agba ume. Onye ọrịa ahụ na-ekuku oxygen na ọkwa dị elu karịrị 21% nke a na-ahụ na ọnọdụ ikuku dị ala.
Hyperbaric ọgwụ na-adabere n'ụkpụrụ abụọ bụ isi nke physics.
"Iwu Henry"Na-ekwu na ọnụ ọgụgụ nke gas na-agbaze n'ime mmiri mmiri dị ka nrụgide nke gas n'elu mmiri ahụ, ọ bụrụhaala na ọ dịghị ihe mejupụtara.
"Iwu Boyle"Na-ekwu na n'ogologo okpomọkụ, olu na nrụgide nke gas dị iche iche.
Nke a pụtara na gas ga-agbakọta ọnụ yana ihe nrụgide na-arụ na ya. N'iji iwu ndị a eme ihe na-eme ka ikuku oxygen na-ebute ya na anụ ahụ.
Ọganihu a nke nrụgide nke ikuku oxygen na larịị nke cellular nwere ike imezi usoro ọgwụgwọ ma nyere aka na mgbake site na ọtụtụ ihe ngosi.
Mmetụta ndị dị ntakịrị ma adịkarịghị adị ogologo oge. Ọgwụgwọ Hyperbaric abụghị ihe ngwọta maka ọtụtụ ihe ngosi ma ọ gosipụtara igosi ikike ndị na-adịghịzi ahụ ike, na-enyere ndị ọrịa aka na nsogbu sitere na ọnyá na-adịghị ala ala nye nkwarụ mgbagwoju anya na mmerụ ahụ.
Hyperbaric Oxygen ọgwụ History
Ngwọta a nwere ike ịchọtaghachi na 1600.
Na 1662, mbụ Ụlọ Hyperbaric bụ onye ụkọchukwu Britain nke aha ya bụ Henshaw wuru ma rụọ ya. Ọ wuru otu ụlọ a na-akpọ, Domicilium, nke a na-eji agwọ ọnọdụ dị iche iche.
Na 1878, Paul Bert, bụ ọkà mmụta sayensị nke France, chọpụtara njikọ dị n'etiti ọrịa mkparịta ahụ na nitrogen na-egosipụta na ahụ. Bert mesịrị chọpụta na enwere ike iwepụ ihe mgbu site na mkpesa.
Ebumnuche nke ịgwọ ndị ọrịa n'okpuru ọnọdụ nrụgide ka onye France bụ dọkịta na-awa France bụ Fontaine, bụ onye mesịrị wuo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ mobile na 1879. Fontaine chọpụtara na ịmịnye oxide nitrous nwere ike karịrị nrụgide, na mgbakwunye na ndị ọrịa ya nwere mmikpu dị mma.
Ná mmalite nke 1900, Dr. Orville Cunningham, bụ prọfesọ nke ọgwụgwọ ọrịa, chọpụtara na ndị nwere ọrịa obi obi dị mma ka mma mgbe ha bi nso n'ogo mmiri karịa ndị bi n'elu elu.
Ọ na-emeso otu onye ọrụ ibe ya nke na-arịa ọrịa influenza ma dị nso na ọnwụ n'ihi mkpụmkpụ anụ ahụ. Ihe ịga nke ọma ya mere ka o nwee ike ịzụlite ihe a maara dịka "Ụlọ Ụlọ Ọgwụ" nke dị n'akụkụ ọdọ mmiri Erie. E guzobere usoro ihe isii ahụ na 1928 ma bụrụ 64 ụkwụ. Ụlọ ọgwụ ahụ nwere ike iru 3 kpamkpam (44.1 PSI). O di nwute, n'ihi ego ego dara adaba nke aku na uba, e mebiri ya n'oge 1942 maka mkpofu.
Ụlọ agha Hyperbaric mesịrị mepụta ya site na ndị agha na 1940 ka ha na-emeso ndị dị omimi miri emi na-arịa ọrịa mgbarụ.
Na 1950, ndị dọkịta na-ebute ọgwụ ahụ Hyperbaric mbụ n'oge ịwa obi na nsị, nke mere ka o jiri ya mee ihe na-egbu carbon monoxide na 1960. Kemgbe ahụ, a rụchaala ihe gbasara 10,000 ihe gbasara ahụike na ọmụmụ ihe maka ọtụtụ ngwa ndị ọzọ metụtara ahụike na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nsonaazụ ndị na-eme ka akụkọ ahụ nwee ọganihu.
UHMS na-akọwa Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ (HBOT) dị ka ihe na-eme ka mmadụ na-eburu 100% oxygen nso mgbe ọ bụla n'ime ụlọ hyperbaric nke na-eme ka ọ dị elu karịa nrụgide oké osimiri (1 ikuku kpamkpam, ma ọ bụ ATA).
Maka ebumnuche ọgwụ, nrụgide ahụ kwesịrị ịdị ma ọ bụ karịa 1.4 ATA ka ọ na-eku ume na nso 100% oxygen.
United States Pharmacopoeia (USP) na Kọmpụ Na-eme Ka Ejikọta Mmasị (CGA) Nzuzu Dezie ọgwụ oxygen dị ka ọgwụ na-erughị 99.0% site na olu, na National Fire Protection Association kwupụtara USP ọgwụ na-ekesa oxygen.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-anọchi anya usoro ọgwụgwọ kachasị mma ma na ndị ọzọ ọ bụ ihe jikọrọ ya na ịwa ahụ ma ọ bụ ịme ọgwụ.
A pụrụ ime ọgwụ na Ụlọ Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber ma ọ bụ Multiper Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber.
Ụlọ Hyperbaric Ụlọ Ọgwụ Na-ekpo Ọgwụ ịbanye otu onye ọrịa; a na-etinye ọnụ ụlọ ahụ dum na nso 100% oxygen, onye ọrịa ahụ na-eku ume ikuku oxygen na-ekpo ọkụ ozugbo.
Ụlọ ọrụ Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ dị iche iche jide mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa (ndị ọrịa, ndị na-ekiri, na / ma ọ bụ ndị na-akwado ọrụ).
Igwe otutu Igwe na-ejikarị ikuku na-agbanye ume mgbe ndị ọrịa na-eku ume na nso 100% oxygen site na masks, isi hoods, ma ọ bụ ikpere azụ.
Dị ka UHMS si kọwaa na mkpebi nke Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) na ndị ọzọ na-ebu ndị ọzọ, iku ume 100% oxygen na 1 ikuku nke nrụgide ma ọ bụ ikpughe akụkụ ahụ dịpụrụ adịpụ gaa na 100% oxygen abụghị Hyperbaric oxygen ọgwụgwọ.
Ọrịa Hyperbaric ga-enweta oxygen site na nsị n'ime ụlọ nrụgide. Ozi dị ugbu a na-egosi na nrụgide ahụ kwesịrị ịbụ 1.4 ATA ma ọ bụ karịa.
Enwerela ihe ngosi 14 ugbu a na USA.
Ikuku ma ọ bụ Gas Embolism
Egwuregwu Carbon Monoxide na-egbu egbu
Clostridial Myositis na Myonecrosis (Gas Gangrene)
Ọrịa Crush, Ọrịa nke Ogwe na Mmetụta Ndị Ọzọ Na-akpata Ọmịiko
Nkwado nke ụlọ
Akwụmịmia siri ike
Mkpụrụ obi na-eme ihe na-adịghị mma
Ihe na-akpata nsị na-adịghị mma
Mgbatị Mgbatị Na-egbu Oge (Ụdị Ncha na Bony Necrosis)
Egwuregwu na Mgbagwoju
Ọrịa Ọkụ Na-ere Ọkụ Ọkụ
Ọgwụgwụ Ntị Mkpuchi Ọkụ nke Mberede
Gịnị abụghị ụlọ Hyperbaric?
Ogwu oxygen kachasị elu, ma ọ bụ Topox, na-eduzi site na obere ụlọ a na-etinye n'elu ngwụcha ma tinye ya na oxygen. Onye ọrịa ahụ anaghị ekuku ikuku oxygen, ọ bụghịkwa akụkụ ahụ fọdụrụnụ na-agbanye ume. Ya mere, onye ọrịa ahụ agaghị enweta uru site n'aka ọtụtụ ọgwụ ndị dị mma nke ọgwụ Hyperbaric, nke na-adị n'usoro ma ọ bụ na-eme na ọkwa dị elu karịa ikuku oxygen nwere ike ịbanye (lee Hyperbaric Physics and Physiology section below). Topox dabeere n'echiche bụ na ikuku oxygen na-apụta site na anụ ahụ dị omimi nke 30-50 microns.  Usoro a anaghị emeso DCS, ihe ejiji gas (AGE), ma ọ bụ nchịkwa carbon monoxide (CO).
Na Topox -emepụta nrụrụ dị iche iche aghaghị ịmepụta n'etiti igwe na ikuku ikuku iji kpoo igwe. Iji mee ka njedebe ghara ịpụ site na igwe akụrụngwa ahụ, ọkpụkpọ nke igbe ahụ kwesịrị ịbịaru na njedebe, si otú ahụ na-emepụta njem nleta dịka mmetụta. Topox adịghị ekpuchi mkpuchi, ma akwụkwọ akụkọ bụ Diabetes Care na-akwado ya maka ọgwụgwọ ọnya ụkwụ.
Ụdị ụlọ nke ọzọ bụ ụlọ Mild Hyperbaric nwere ike ime. E nwere ike ịmegharị arịa ndị a dị nro na 1.2-1.5 zuru oke (ATA). FDA nabatara ha naanị maka ọgwụgwọ ọrịa oke. A na-ere ahịa ndị ọrịa ọrịa dị elu dị elu dị ka "Mild Hyperbaric Rooms" maka ndị a na-enweghị atụ-akara ngosi.
Physics na Physiology nke hyperbaric ọgwụ
Nkà na ụzụ dị na Hyperbaric Oxygen Treatment (HBOT) dị n'ime iwu gas kacha mma.
A na-ahụ ngwa Boyle (p1 v1 = p2 v2) n'ọtụtụ akụkụ nke Ọgwụ Hyperbaric. Nke a nwere ike ịba uru na ihe atụ ndị dịka ọrịa discompression (DCS) ma ọ bụ akara gas gas. Ka nrụgide ahụ na-arịwanye elu, olu nke banyere nha na-ebelata. Nke a na-aghọkwa ihe dị mkpa na mkparita ụlọ; ọ bụrụ na onye ọrịa ejiri ume ya, olu nke gas na-etinye n'ime akpa ume na-agbasa ma nwee ike ime ka pneumothorax.
Charles iwu ([p1 v1] / T1 = [p2 v2] / T2) na-akọwa ọganihu dị elu mgbe a na-ebugharị ụgbọ ahụ ma na-ebelata okpomọkụ na depressurization. Nke a dị mkpa icheta mgbe ị na-emeso ụmụaka ma ọ bụ ndị ọrịa na-arịa ọrịa ma ọ bụ na-etinye aka na ha.
Iwu Henry na-ekwu na ọnụego gas na-agbaze n'ime mmiri dị ka nrụgide dị iche iche nke gas na-arụ n'elu mmiri ahụ. Site n'ịbawanye nrụgide dị n'ime ụlọ ahụ, enwere ike ịmalite ikuku oxygen n'ime plasma karịa ka a ga-ahụ na nrụgide n'elu.
Onye dibịa ahụ ga-enwe ike ịgbakọ ole oxygen na-anata. Iji mee ka ọnụọgụgụ a, a na-eji ikuku zuru ezu (ATA). Nke a nwere ike gbakọọ site na pasent nke oxygen na ngwakọta gas (na-abụkarị 100% na Ọrịa Oxygen; 21% ma ọ bụrụ na iji ikuku) ma gbasaa site na nrụgide. A na-egosipụta nrụgide na ụkwụ nke mmiri mmiri, nke bụ nrụgide ahụmahụ ma ọ bụrụ na otu na-agbadata na omimi ahụ n'oge mmiri. Enwere ike ịtụ ụdị na nrụgide n'ọtụtụ ụzọ. Ụfọdụ mgbanwe ndị ọzọ bụ 1 ikuku = 33 ụkwụ nke oké osimiri = 10 mita nke mmiri mmiri = 14.7 pound kwa square nke anụ ọhịa (psi) = Ogwe 1.01.
Hyperbaric Oxygen Treatment (HBOT) Nkọwapụ
Hyperbaric oxygen ọgwụ na-akọwa onye na-eku ume 100 percent oxygen na nrụgide karịrị oke osimiri maka oge a kara aka-nke na-emekarị 60 ka 90 nkeji.
Nsogbu nke ikuku - Ikuku anyị na-eku ume bụ 20.9 percent oxygen, 79 pasent nitrogen, na 0.1 pasent gas. Akwụ ọka nkịtị na-arụ ọrụ n'ihi na o nwere ibu ibu, a na-adọrọkwa ịdị arọ a n'ebe nnukwu etiti ụwa. E gosipụtara nrụgide ahụ dị ka nrụgide nke ikuku. Mmetụta dị na mbara igwe na-enwe 14.7 pound kwa square inch (psi).
Nsogbu Hydrostatic - Ka ị na-arị elu n'elu oké osimiri, nrụgide nke ikuku na-ebelata n'ihi na ọnụ ọgụgụ elu nke elu dị elu karịa gị. Ọ bụrụ na ị na-adaba n'okpuru oké osimiri, ihe ọzọ na-eme (nrụgide ahụ na-abawanye) n'ihi na mmiri nwere ibu dị elu karịa ikuku. N'ihi ya, miri emi na-agbada n'okpuru mmiri ka nnukwu nrụgide ahụ. A na-akpọ nrụgide a nsogbu nrụgide.
Enweghị ihe mgbochi (ATA) - ATA na-ezo aka n'igosi nrụgide nke bụ eziokwu n'agbanyeghị ọnọdụ. N'ụzọ dị otú a, enwere ike iru nyocha dị elu ma ọ bụ dị n'elu ma ọ bụ n'okpuru larịị.
E nwere okwu dịgasị iche iche maka nrụgide ntụtụ. Ọgwụ HBO na-eme ka nrụgide dị ukwuu karịa nke ahụ dị n'elu ala n'elu oké osimiri, nke a na-akpọ nsogbu hyperbaric. Usoro ma ọ bụ nkeji na-egosipụta hyperbaric nsogbu gụnyere millimeters ma ọ bụ sentimita asatọ nke mercury (mmHg, inHg), pound kwa square inch (psi), ụkwụ ma ọ bụ mita nke mmiri mmiri (fsw, msw), na ikuku kpamkpam (ATA).
Otu ikuku zuru ezu, ma ọ bụ 1 ATA, bụ nrụgide nke ikuku dị na mmiri, ma ọ bụ 14.7 psi. Ebe ikuku abụọ zuru ezu, ma ọ bụ 2 ATA, bụ okpukpu abụọ nke nrụgide nke ikuku na-arụ n'oké osimiri. Ọ bụrụ na dọkịta na-edepụta otu awa nke ọgwụgwọ HBOT na 2 ATA, onye ọrịa ahụ na-eku 100 percent oxygen maka otu awa ma ọ bụ ugboro abụọ ka nrụgide ikuku dị na oké osimiri.
Ajụjụ Hyperbaric : Nnyocha Hyperbaric : Ozi Hyperbaric